Beesha caalamka oo loo gudbiyay qoraal la xiriira muranka ka tagan Doorashada Soomaaliya | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Beesha caalamka oo loo gudbiyay qoraal la xiriira muranka ka tagan Doorashada...
Beesha caalamka oo loo gudbiyay qoraal la xiriira muranka ka tagan Doorashada Soomaaliya
Muqdisho (Halqaran.com) – Midowga Musharraxiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa ay qoraal la xiriira muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya u direen Xubnaha Beesha Caalamka ee taageerada siiya Soomaaliya.
War qoraalkan oo ku qoranaa luuqadda English-ka ayaa waxaa ay ku sheegeen in xalka uu noqon karo in doorashooyinka lagu qabto hal magaalo,
Sidoo kalena arrinta kuraasta Somaliland loo madax bannaaneeyo Gudoomiyaha Golaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdullaahi.
Xubnaha Midowga Musharraxiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa ay qoraal la xiriira muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya waxaa ay u direen Xubnaha Beesha Caalamka ee taageerada siiya Soomaaliya.
Qoraalka loo diray beesha caalamka ayaa waxaa lagu sheegay in xalka uu noqon karo in doorashooyinka lagu qabto hal Magaalo, sidoo kalena arrinta kuraasta Somaliland loo madax bannaaneeyo guddoomiyaha golaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdillaahi.
Ugu dambeyn, Midowga Musharraxiinta Madaxweynaha ayaa waxaa ay sheegeen inay diyaariyeen Liiska xubnaha ay tahay in laga saaro Guddiga doorashada ee lagu muransan yahay, maadaama dowladda ay dhowr jeer sheegtay iny u soo gudbiyaan.
Halka hoose ka akhriso qoraalka loo diray beesha caalamka oo English ku qoran:
Dacwo ka dhan ah doorashada Soomaaliya